Ama-PUBG Lite Hacks 🥇 Ukukopela, i-Aimbot, i-ESP, iWallhack - iGamepron
I-PUBG BHEKA IZIKHALA
Akukho lutho oluthi "lite" ngalokhu kugenca! Nge-PUBG Lite ESP yethu, i-Aimbot, iWall Hack, neNo Recoil, akekho umuntu kunoma yimuphi umdlalo ozokwazi ukumisa umbuso wakho ophakeme.
Usuvele uthenge iPUBG Lite Hack? Thola izinyathelo ezilandelayo lapha
Uyacelwa ukuthi uqaphele: Ngaphambi kokuthi uthenge ama-PUBG Lite hacks ethu, qiniseka ukuthi ithuluzi ofuna ukulithenga lisanda kuvuselelwa noma lisasebenza ku-inthanethi. Ngenkathi sihlala sibuyekeza amathuluzi ethu, kukhona ukubambezeleka kwesikhathi sokulethwa kwezinye izimo; ngenkathi kuvame ukushesha, kungathatha futhi amahora ambalwa. Onke amathuluzi ethu akhiyiwe nge-HWID, okusho ukuthi ungawasebenzisa kuphela kukhompyutha eyodwa - qiniseka ukuthi ikhompyutha yakho iyahambisana nawo wonke amathuluzi ethu ngaphambili. Akukho ukubuyiselwa kwemali okuzonikezwa uma usubonile ukhiye womkhiqizo!
Okukhethiwe kwethu I-PUBG Lite Hacks
Ama-PUBG Lite Hacks, i-Aimbot, i-Norecoil, i-ESP, iWall Hacks nokuningi
Inkosi likaHack yilelo elaligqokwe
Iphupho likaHack yilelo elaligqokwe
Thenga I-PUBG Lite Hacks in 4 izinyathelo
Khetha umdlalo ofuna ukuwuthenga ukuze uwuthole kalula.
Sinezindlela eziningi ezahlukahlukene ze-PUBG Lite ongakhetha kuzo, konke okuzokusiza ukuthi uwine.
Iprosesa yethu yokukhokha ekhethekile izophatha zonke izinkokhelo zakho ngokuphepha!
Finyelela Ukhiye Wakho & Landa ama-PUBG Lite Hacks!
Lapho usunikezwe ukufinyelela kukhiye wakho womkhiqizo ungalanda i-PUBG Lite hack
Kungani Usebenzisa i-Gamepron PUBG Lite Hacks?
Yize i-PUBG ingumdlalo wokuqala wempi royale wonke umuntu owathandayo, abafowabo abahambayo bayisitha esiphikisayo. Abadlali abaningi badlala phambili kulezi zinsuku futhi lokho kudale isidingo esithile semidlalo yeselula, yingakho iPUBG Lite isithandwa njengomsunguli wayo, futhi abanye abantu baze bathi iPUBG Lite inguqulo engcono kakhulu. Ngenkathi "ikhonsoli" yeselula (okusho ukuthi amadivayisi akho ahlakaniphile) iya ngokuya iba ngcono, ayikwazi ukunikela ngohlobo olufanayo lwemidwebo ongayithola kukhompyutha. Ngalokho kushiwo, kusengumdlalo omuhle futhi kunesizathu sokuthi kungani abantu abaningi benesithakazelo kuma-PUBG Lite cheats - ungahle ungazi okwamanje, kepha kunenqwaba yabakhohlisi nabadlali abanamakhono okufanele babhekane nabo.
Ukuya kumdlalo wePUBG Lite ngaphandle kohlobo oluthile lwe-PUBG Lite Hack kunikwe amandla cishe yisigwebo sentambo ngoba abantu abaningi basebenzisa le midlalo kumakhompyutha abo futhi basebenzise ukukopela ukuze kuzuze bona. Awusoze wafuna ukungena phakathi kwesigelekeqe se-PUBG nokunqoba kwabo, singakutshela okungako! Uma ungakaze uzwe amandla ahambisana neHUB ephezulu ye-PUBG Lite Hack, i-Gamepron inokudla okukhethekile kuwe. Akudingeki ukuthi ube ngumkhohlisi onolwazi ukusebenzisa i-PUBG Lite hack yethu, njengoba senze inqubo yokufaka yaba lula!
Sinikeza ukusekelwa kwamakhasimende we-stellar futhi lokho kuzoba wusizo olukhulu uma uzithola unenkinga ethile, noma ngabe kunenkinga ngokugenca ngokwakho noma imibuzo nje ejwayelekile. Abathuthukisi abaningi be-hack bazokushaya indiva ukwesekwa kwamakhasimende kwinsizakalo yabo, futhi yingakho ungeke uthole impendulo - sinikeza i-Live Chat nezinye izinhlobo zokuxhaswa kwamakhasimende ukukugcina ukopela futhi unqoba imidlalo ngokungaguquguquki ngangokunokwenzeka.
Inani lezici ezitholakala ngaphakathi kwe-PUBG hack yethu lizokusiza ukuthi ungakhuli nje kuphela njengomdlali we-PUBG Lite kepha futhi ube ngumdlali wegeyimu ngokujwayelekile. Lapho ubona ukuthi ungasebenzisa ngempumelelo ukuthandwa kwe-PUBG Lite ESP yethu, iWall Hack, ne-Aimbot ukuwina wonke umdlalo owudlalayo, kuyisikhathi nje ngaphambi kokuba uqale ukuthenga okhiye bomkhiqizo kweminye imidlalo oyithandayo!
I-PUBG Lite Wall Hack (ESP)
Imininingwane ye-PUBG Lite Player ESP (Igama, imigoqo yezempilo, ibanga)
I-PUBG Lite Item ESP enezihlungi
I-PUBG Lite Aimbot
PUBG Lite izexwayiso zesitha
Imodi ye-PUBG Lite super jump (akukho monakalo wokuwa lapho yenziwe yasebenza).
PUBG Lite bone & key key okulungisekayo.
Isinxephezelo sePUBG Lite Recoil
Impela I-PUBG Lite Hack Izici
Sebenzisa i-PUBG Lite Player ESP yethu ukukhomba indawo yezitha, noma ngabe zingemuva kwendawo eqinile / e-opaque
Ungasebenzisa i-ESP Hack ukukhomba abadlali ngamagama abo, ukuthi basele impilo engakanani, ngisho nebanga labo!
Sebenzisa izihlungi zezinto zethu ze-PUBG Lite ESP ukuthola ukuthi hlobo luni lwezinto ezikulindele ngaphakathi kwezakhiwo!
Ngokusobala ukugenca kwethu okuthandwa kakhulu yi-PUBG Lite kungaba yi-PUBG Lite Aimbot yethu ekhethekile, etholakala kuphela lapha eGamepron. Amashothi akho azohlala njalo emaki lapho usebenzisa ama-cheats ethu!
I-PUBG Lite Bullet track (isebenza ngamabanga amafushane naphakathi)
Landelela izinhlamvu zakho bese ubona ukuthi zifika kuphi kusuka emabangeni amafushane kuye kwaphakathi besebenzisa i-PUBG Lite Hack yethu! Ungayisebenzisa ukukhomba izindawo zesitha bese ubona ukuthi ukubulala kwakho kukude kangakanani.
Kufanele ubeke ikhanda lakho ku-swivel, yingakho isici sethu Sokuxwayisa siphelele. Umlayezo uzoboniswa lapho izitha zisondele kakhulu noma ziqonde kuwe!
Imodi ye-PUBG Lite super jump (akukho monakalo wokuwa lapho yenziwe yasebenza)
Imodi yethu ye-Super Jump izokugcina uphila kusukela ekuweni okungenakucatshangwa kakhulu, ngakho-ke akudingeki ukhathazeke ngomonakalo wokuwa ngenxa yalokho lapho usebenzisa iPUBG Lite Hack yethu.
PUBG Lite bone & key key okulungisekayo
I-aimbot yethu ye-PUBG Lite iza ifakwe ukuthandwa kwe-Bone Prioritization nezinye izilungiselelo ezilungisekayo, okukuvumela ukuthi wenze ngezifiso isipiliyoni sakho se-PUBG Lite Hack.
Amasheke wePUBG Lite aimbot abonakalayo
Amasheke abonakalayo alungele abasebenzisi be-PUBG Lite Aimbot, futhi akhona lapha ngaphakathi kwe-PUBG Lite Hack yethu engenacala! Amasheke abonakalayo enza ukuqinisekisa ukuthi kubulala umoya.
Ukubuyiswa kwemali kuzokubulala ngesikhathi esithile, futhi kungenzeka ukuthi lapho uzonquma ukufinyelela ku-PUBG Lite Hack yethu futhi uthole isici sesinxephezelo
Yiba Umdlali Ohamba Phambili we-PUBG Lite
Impilo ayilungile futhi sonke siyayazi, yingakho ukusebenzisa iPUBG Lite Hacks ukuya phambili akukubi kangako! Cishe uke waphucwa ukuwina noma amabili ngabagengebi esikhathini esedlule, futhi kuthi engqondweni "iso ngeso". Ngazo zonke izici ezikhethekile nokuvikeleka okufakwe ngaphakathi kwe-PUBG Lite Hack yethu, kuzoba nzima ukudlulisa leli thuba phezulu!
Ama-HUB nama-Cheats adumile
IPUBG Lite ESP neWallhack
Amanye ama-PUBG Lite Hacks nama-Cheats
I-Gamepron ihlinzeka ngama-PUBG Lite Hacks athandwa kakhulu futhi aphambe atholakala ku-intanethi, futhi uma ungasikholwa, zizizamele! Umehluko ubonakala ngokushesha, njengoba ungasebenzi nesikrini esiminyene ngenxa ye-PUBG Lite Wall Hack esezingeni eliphansi. Senze konke okudingekayo ukuqinisekisa ukuthi amathuluzi ethu ayizinga eliphakeme kakhulu, futhi sicwaninge amanye ama-PUBG Lite Hacks ukulungisa izinto.
Ungacabanga ukuthi i-PUBG Lite hack yethu ingxube ephelele yawo wonke amathuluzi akho owathandayo, ahlanganiswe ndawonye. Akusadingeki ube nethemba lokuthi uthola abalingani beqembu elihle noma indawo yokwamukela izivakashi enhle uma ungumdlali weSolo ngoba i-hack yethu ye-PUBG Lite izokuvumela ukuthi uwine umdlalo kungakhathalekile. Noma ngabe ufuna ukuphatha ithimba noma ube yimpisi eyodwa, iPUBG Lite Hack yethu izokuvumela ukuthi wenze umsebenzi kalula. Akunasidingo sokulwa nemishini yemidlalo neminwe enonile lapho ama-cheats ethu elapha ukukusiza!
I-PUBG Lite Aimbot yethu ithathe konke abantu abakuthandayo kusuka kuthuluzi lethu langempela futhi yaliguqula laba uhlobo lweselula. Usenakho ukufinyelela kuzo zonke izici ezinhle ezihlotshaniswa ne-PUBG Aimbot yethu yoqobo, efana ne-Bone Prioritization ne-Automatic Aim / Fire nezinye izinto eziningi ezizuzisayo! Ungenza ngokwezifiso isipiliyoni sakho se-PUBG Lite Aimbot ngethuluzi lethu, futhi yilokho abasebenzisi abaningi badonselwa kubo kakhulu - awukhawulelwe ekwenzeni yonke into isebenze ngasikhathi sinye, uzokhetha futhi ukhethe!
Ukunemba kwakho kuzocacisa umphumela wawo wonke umdlalo, akunandaba ukuthi zinhle kangakanani izibhamu zakho nezikhali zakho! Uma ungakwazi ukudubula umbuthano wokugcina izinto zizonamathela (futhi ziyashesha!), Kungakho ukusebenzisa iPUBG Lite Aimbot yethu ukuqinisekisa ukuthi umhlaba wokudubula ubalulekile empumelelweni yakho.
Wake wabulawa ngumuntu odongeni noma ekhoneni futhi wazibuza ukuthi bazi kanjani ukuthi ukhona? Kungenzeka ukuthi bane-PUBG Lite ESP neWall Hack enikwe amandla, ebanikeza amandla okubona izitha ngezindawo eziqinile / ezi-opaque. Ngenkathi abanye abahlinzeki abaningi be-hack bezokukhawulela uma kukhulunywa ngezici, ungabuka izinketho ezahlukahlukene ezahlukahlukene ze-ESP lapha eGamepron. Noma ngabe ufuna ukubona ukuthi isitha sishiye impilo engakanani, ibanga laso, noma ukuthi isiphi isikhali abasisebenzisayo, i-PUBG Lite ESP yethu ne-PUBG Lite Wall Hack ikunikeza ithuba lokukwenza.
I-Wall Hacks ingakusiza ukuthi ulungiselele ukuqamekela kwamaqembu ezitha, noma wenze nje ama-callout ozakwenu osebenza nabo. Noma yini ohlela ukuyenza ngePUBG Lite ESP neWall Hack, yazi nje ukuthi i-Gamepron ingumhlinzeki ongcono kunakho konke okudingayo. I-Wallbang ne-pop ezungeza amakhona ngokudubula ngokuzethemba lapho i-PUBG Lite Wall Hack yethu inikwe amandla!
Ukugcina umkhondo wesitha sakho kulula ngokwanele nge-PUBG Lite ESP neWall Hack yethu, kepha sithatha izinto ngokuqhubeka ngokukuvumela ukuthi ubone imikhondo yabo phezu kwalokho. Ungabamba izitha zakho njengezinyamazane ngokulandela umkhondo wezinyathelo zazo, bese uzikhipha ngesici Somonakalo Ophakeme! Akunandaba ukuthi yiziphi izikhali ozisebenzisayo, ungavula isici Sokulimala Okuphezulu bese uletha ubuhlungu obuningi kubaphikisi bakho ngenhlamvu ngayinye. Akuthathi usosayensi we-rocket ukuqonda ukuthi kungani zombili izici ze-Footprints kanye ne-High Damage zingasiza kangaka, kepha futhi ziyizici ongeke uzithole ngokwesiko ku-PUBG Lite Hack. Ngokujabulisayo, sithanda ukwenza izinto ngokuhlukile lapha eGamepron!
Isici se-Distance silungele uma ubona isitha, kepha awuqiniseki ukuthi bakude kangakanani. Kunamathuba lapho ucabanga ukuthi kungaba isinyathelo esifanele sokuzibandakanya, kepha isici sethu se-Distance sizosiza ukwenza izinto zibonakale ngokusobala.
Sinikeza izici eziningi ezahlukahlukene ngaphakathi kwe-PUBG Lite Hack yethu, zonke ezazenzelwe abasebenzisi lapha eGamepron. Sitholile ukuthi iziphi izici ezidume kakhulu kuwo wonke ama-hacks ethu akhishwe ngaphambilini futhi sakhetha ukuzifaka ngaphakathi kwe-PUBG Lite Hack yethu, kanye nokufaka ezintsha ezimbalwa! Sinikeza isici se-Removals esingakusiza ukuthi ususe izinto ezicasulayo ezifakwe emdlalweni, ukusabalala okunjalo nokusabalala kwenhlamvu - futhi sikuvumela ukuthi ulahle ezinye izinto eziguqukayo njengenkungu nentuthu.
Izici ezilwa nokukopela ezifakwe kwi-PUBG Lite Hack yethu ziyamangalisa, ukusho okuncane; awudingi ukukhathazeka ngama-akhawunti avinjelwe noma eminye imiphumela lapho ukopela ngeGamepron. Ukugcina i-akhawunti yakho iphephile ngesikhathi senqubo yokugenca kubalulekile kithi, yingakho sinikela ngo-100% ongatholakali
Kungani ama-PUBG Lite Hacks ethu
Akunakuqhathaniswa uma kukhulunywa ngekhwalithi, wonke ama-PUBG Lite Hacks ethu aklanyelwe ukukugcina unqoba noma ngabe kunjani. Akunandaba ukuthi ungakanani umdlali onamakhono ohlangana naye, iPUBG Lite Hack yethu izobakhipha noma ngabe ikuphi! Sinikeza abafikayo nabadlali abakhungathekile ithuba lokuchuma, futhi okungenzeka ukuthi banyathele kancane.
Kungani iPUBG Lite Aimbot yethu
Izinketho eziningi ze-PUBG Lite Aimbot zizofika ngezimfanelo ezahlukahlukene, ngoba hhayi wonke umuntu angaphila ngokuvumelana nezindinganiso esinazo lapha eGamepron. I-PUBG Lite Aimbot yethu iphakeme ngoba sigxila kwikhwalithi yezici, ngokungafani nobuningi ngamathuluzi ethu; futhi akulimazi ukuthi awusoze waphuthelwa esinye isibhamu!
Kungani iPUBG Lite ESP yethu
Ukusebenzisa i-PUBG Lite ESP yethu kucishe kufane nokuzinikeza isifiso, njengoba uzobona izitha zivela kuzo zonke izinhlangothi. Ngisho nalabo abakha amatende ezakhiweni kufanele bakhathazeke ngentukuthelo yakho, ngoba ukusebenzisa iPUBG Lite ESP yethu kuzodalula ibha yabo yezempilo nezikhali ukukwazisa ukuthi kuzoba yimpi yini ngaphambili.
Kungani iPUBG Lite Wallhack yethu
I-stellar PUBG Lite Wallhack izokunikeza ithuba kukho konke ukuqhuma kwezibhamu, noma ngabe unaso isibhamu sokusebenza. Uzobona izitha ngokusebenzisa indawo eqinile ne-opaque, ekuvumela ukuthi uvikele abaqamekeli futhi ubulale amakamu ngokuthanda kwakho - kuhle futhi ukwazisa ozakwabo eqenjini mayelana nezinsongo ezingaba khona!
Kungani iPUBG Lite Norecoil yethu
Ukubuyiselwa emuva kungakhungathekisa, ukusho okuncane - yingakho bonke abasebenzisi bethu bezothutheleka baye esikhungweni sethu sePUBG Lite NoRecoil. Lapho ungakhathazeki ngokululama ungavele udubule izikhali zakho ngaphandle kokunakekelwa emhlabeni, ngoba ngokuzenzakalelayo uzoba yizinqwaba ezinembe kakhulu kunesitha sakho.
Ungalanda kanjani ama-hacks amahle kakhulu we-PUBG Lite?
I-Gamepron yenza inqubo yokulanda ibe lula kakhulu, njengoba konke okumele ukwenze ukuthenga ukufinyelela kwesinye sezinkinobho zethu zomkhiqizo ezikhethekile futhi ungalanda iPUBG Lite Hack yakho ngokushesha ngemuva kwalokho. Akunasidingo sokuba isigebenga esimnkantshubomvu ngeGamepron, njengoba sizobhekelela wonke umuntu emphakathini wokudlala.
Kungani ama-PUBG Lite hacks wakho abiza kakhulu kunamanye
I-PUBG Lite Hack yethu ingahle ibonakale ibiza kancane uma iqhathaniswa nezinye, kepha lokho kunesizathu esizwakalayo. Sinikeza kuphela ama-hacks ethu ngesilinganiso esilinganiselwe, okusho ukuthi inani elithile kuphela labasebenzisi elizokwazi ukufinyelela kuma-hacks ethu nganoma yisiphi isikhathi. Ngenxa yalokhu, ama-PUBG Lite Hacks ethu abiza kakhulu kunokutholakala kumhlinzeki wakho ojwayelekile.
Sikholelwa ekunikezeni ulwazi lomsebenzisi oluguquguqukayo, yingakho sinikeza okhiye bethu bomkhiqizo ezikhawulweni zesikhathi ezimbalwa ezihlukile. Ungakhetha ukuthenga okhiye bakho bomkhiqizo ukuze uwasebenzise nsuku zonke, masonto onke, nanyanga zonke. Ngemuva kokuthi isikhathi siphelile, kuzodingeka ukuthi uthenge ukufinyelela kukhiye womkhiqizo futhi.
Awesome I-PUBG Lite Hack Izici